ဒေါက်တာ မောင်မောင်သိမ်း | ဂရိတ်ဟော်ခမ်း
ဒေါက်တာမောင်မောင်သိမ်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ဖြင့် ခန့်အပ်ခြင်းခံရပြီး ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံခြားရေးရာများ၊ အစိုးရဘဏ်များနှင့် ဘဏ်မဟုတ်သည့် အခြားငွေကြေးကဏ္ဍများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည်။ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် AFMM နှင့် AFDM+3 အစည်းအဝေးများ၏ ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ နေပြည်တော်၊ ကာဇာစတန်နှင့် တိုကျိုတွင် ကျင်းပသည့် AFDM+3 အစည်းအဝေးများတွင်လည်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကိုယ်စားပြုပြီး တွဲဖက်သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တာဝန်မထမ်းဆောင်မီ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဥပဒေဌာနတွင် အချိန်ပိုင်းနည်းပြအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ထိုမှ အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အမျိုးသား သင်္ဘောလိုင်း၊ အမျိုးသား အာမခံလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ စသည့်ဌာနများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဆရာကြီးသည် B.A. (Law), LL.B., LL.M. Ph.D (နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေအထူးပြု) ဘွဲ့များကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီး ဥပဒေပညာရှင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးရေးရာများကို စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီး Australian and New Zealand Institute of Finance တွင်လည်း အသင်းဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အသုံးချ စိတ်ပညာဘာသာရပ်တွင်လည်း ဒီပလိုမာရရှိသည်။ စာအုပ် ၆ အုပ်ကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ၃၅၀ ကျော်သော ဆောင်းပါးများကိုလည်း ရေးသားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ငွေချေးသက်သေခံလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အသေးစား ငွေချေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်အဖွဲ့များတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ မြန်မာနိုင်င် EITI လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု လုပ်ငန်းအမှုဆောင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျောက်ဖြူနှင့် ဒိုင်ဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များအပါအဝင် ပွင့်လင်းသော အစိုးရ မိတ်ဖက်ပြုမှု အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့များတွင်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင် ပါသည်။
မြန်မာ့ အာမခံစျေးကွက်ကို လွတ်လပ်စေသည့် ဗိသုကာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးဖြစ်သည့် ရန်ကုန် စတော့အိတ်ချိန်းကိုလည်း တည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။